March | 2019 | Radio Himilo
Arsenal oo u dhaqaaqday daafaca Bayern ee David Alaba
Mahad Mohamed March 30, 2019
Himilo FM –Bayern Munich ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay inay iska iibiso David Alaba xagaaga marka uu furmo suuqa kala iibsiga, inkastoo Arsenal ay dooneyso inay la soo wareegto xiddiga reer Austria. Alaba, oo sidoo kale lala ...
Maqal: Casharka Safiinatu Najaa ” Darsiga 19aad
Ahmed Haadi March 30, 2019
Chelsea oo Man Utd kula biirtay tartanka loogu jiro Coutinho
Himilo FM –Kooxaha Chelsea iyo Man Utd ayaa ku dagaalamaya weeraryahanka kooxda Barcelona Philippe Coutinho xagaagan marka uu furmo suuqa kala gadashada ciyaartoyda. Coutinho ayaa Barca kaga soo biiray Liverpool bishii Janaayo 2018. laacibkan ayaa dhaliyay 19 gool 63 kulan ...
Maqal: Barnaamijka Aqoon-kaal
Waa kuma siyaasiga ugu dheer caalamka?
Himilo FM –Xubin katirsan golaha magaalada Newyork ee dalka Mareykanka ayaa loo aqoonsaday siyaasiga ugu dheer caalamka iyadoo dhiririkiisu yahay 208 Sentimitir oo u dhiganta 2.08 Mitir. Robert Cornegy ayaa lagu sharfay xaflad ka dhacday xarunta magaalada Newyork kaddib markii ...
Ninka ugu da’da weyn dalka Ingiriiska oo kuu sir baxaya!
Himilo FM –Waxa uu jimcadii la soo dhaafay u dabaal deggay sannad guuradiisa 111aad, waa qofka ugu da’da weyn dalka Ingiriiska oo ka hadlaya noloshiisa iyo isbadalada ku yimid caalamka. Bob Weighton ayaa wakhti wanaagsan la qaatay saaxiibbadii intii lagu ...
Maxkamad ka mamnuucday muwaadin cabitaanka Pepsi-ga
Himilo FM –Maxkamad Mareykanka ku taalla ayaa muddo afar sanno ah waxay ka mamnuucday muwaadin dalkaasi u dhashay cabitaanka Pepsi-ga kaddib markii uu xaday gaari. Qaadiga maxkamadda gobalka Ohio ee dalka Mareykanka ayaa ciqaabta layaabka leh ku riday muwaadinka dhallinyarada ...
Maxey tahay sababta Luis Figo uu Barca kaga wareegay Real Madrid?
Mahad Mohamed March 28, 2019
Himilo FM –Mar kasta oo la soo hadal qaado xiddigii hore ee xulka Portugal, waxa imaneysa is-weydiinta ah, Maxuu Barcelona uga tagay xagaagii 2000 islamarkaana uu ugu biiray naadiga ay xifaaltamaan ee Real Madrid?. Ninkaan reer Portugal ayaa carrabka la ...
Man United oo kalsooni seddex sanno siisay Ole Gunnar Solskjær
Himilo FM –Ole Gunnar ayaa qandaraas gaarsiisan seddex xagaa qalinka ugu duugay naadiga United kaddib bandhiggii cajiibka ahaa ee xagaagan. Tan ayaa ka dhigan in Ole oo Red Devils si kumeel gaar ah u leyliya uu hoggaanka rasmiga baaqi ku ...
Wax ka oggow taariikhda macallin Cabdiraxmaan Macallim “Taree”
Himilo FM –Cabdiraxmaan Macallim Axmed oo ku caan baxay magaca Taree waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Warta nabadda sannadkii 1976-kii. Waxa uu xafiday Qur’aanka kaddib waxa uu ku biiray iskuulka Maxamuud Xarbi isaga oo halkaasi ku ...
Lakulan – Da’yarkii hoy la’aanta ahaa ee noqday milyaneer
Xiddigta 6 sanno jirka ee Youtube oo loo iibiyay guri ku kacaya $8 Milyan